Mihary Aina : kendrena ny fampandrosoana ny tanora | NewsMada
Mihary Aina : kendrena ny fampandrosoana ny tanora
Par Taratra sur 07/02/2017
Miantsehatra amin’ny zo iombonana ny fikambanana Mihary Aina. Naorin’ny Tanora malagasy mpanabe sy mpirotsaka amin’ny asa fampandrosoana mampiombona ny fikambanana. Iompanan’ireo sahanasa ny ady amin’ny fahantrana, fikajiana tontolo iainana ary mahaolom-pirenena amin’ny faritra maro eto Madagasikara. Anisan’izany ny eto Analamanga, Melaky, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. Mpilatsaka an-tsitrapo 50 eo ho eo, ankoatra ireo mpikambana fototra sy ny mpikambana mpitantana izay tarihan’ny filohany sady mpanorina Rakotoarimanana Tamby, ny miantoka ny fahatanterahan’ireo tetikasan’ny fikambanana.
Efa nisitraka tombontsoa avy amin’ny tetikasa nataon’ny fikambanana ireo fianakaviana maro nandritra izay telo taona nijoroany izay. Afaka manohy fianarana ireo ankizy 20 hatramin’izao. Hazo 5 000 fototra no voavoly hanampy amin’ny fiarovana ireo loharano. Anjatony ireo mpanao asa tanana afaka mivelona ao anatin’ny famokarana manaja ny tontolo iainana sy ho amin’ny fiombonana. Miara-manolotra ora hirotsahana amin’ny fanatanterahana ny fampandrosoana mampiombona ireo tanora.
Miara-miasa amin’ireo malala tanana ny fikambanana amin’ny fanatanterahana ireo sahanasa. Anisan’izany ny kaominina amin’ny fanamorana rehetra, indrindr nya eo amin’ny lafin’ny fikarakarana ireo taratasy ho an’ny mpianatra.
Mahazo fitaovana maimaimpoana
Eo ihany koa ireo orinasa manolotra maimaimpoana ireo fitaovana sy akora ampiasain’ireo mpisitraka tombontsoa. Ohatra amin’izany ny fako mbola azo ahodina hamokarana fitaovana fampiasa andavanandro. Vokatra ara-pambolena efa natoraly kosa, tsy ampiasana zezika na fanafody simika na biolojika na akora hafa no efa novokarin’ireo tantsaha.
Ampahana endrika fandraisan’anjaran’ireo mpisitraka tombontsoa amin’ny fampandrosoana ao anatin’ny fanajana ny zo iombonana ireo asa tanana vita amin’ny fako neverina ampiasaina. Vinavinaina ho tratra mialoha ny taona 2030 kosa, ho 50% ny Tanora malagasy eo amin’ny faritra iray misy azy no hirotsaka hitondra fampandrosoana mampiombona eo amin’ilay toerana. Hatao modely, hatomboka amin’ireo distrika renivohi-paritra izay hiasan’ny Mihary Aina amin’izao ny hanatrarana izany.